Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, प्रतितोला ७१ हजारमा कारोबार – Emountain TV
सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, प्रतितोला ७१ हजारमा कारोबार
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाली बजारमा सुनचाँदिको मुल्यमा लगातार उत्तारचढाव आईरहेको छ । लगातार बढिरहेको सुनको मुल्य साउन २८ गते मंगलबार प्रतितोला ७१ हजारमा कारोबार भयो जुन अहिले सम्मकै उच्च मुल्य हो । सुनको मुल्यमा बृद्धि भएपछि व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा सुनको भाउले हरेक दिन नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउने गरेको छ । साउन २८ गते प्रतितोला ७१ हजार पुगेको सुनको मुल्य बुधबार भने केहि घटेर ७० हजारमा कारोबार भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा सुनको मुल्यमा अत्यधिक बृद्धि भईरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य महँगिदा नेपालमा पनि त्यसको असर परेको हो । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध, अमेरिकी केन्द्रिय बैंकले गरेको ब्याजदर बृद्धि लगायतका कारण सुनको मूल्य बढेको हो । मुल्य बढेपछि बजारमा सुनको बिक्री ठप्प जस्तै भएको छ ।
सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार साउन १ गते यता प्रतितोला ६ हजार ५ सय रुपैयाँले सुनको मुल्यमा बृद्धि भएको छ । साउन १ गते प्रतितोला ६४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन अहिले प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको हो । सुनको मूल्यमा दैनिक नयाँ रेर्कड बनेपछि व्यवसाय नै संकटमा परेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । व्यवसायीका अनुसार मुल्य बढेपछि सुन खरिद गर्ने ग्राहक नै छैनन् ।
सुन खरिद गर्न पसलमा पुगेका ग्राहकहरु मुल्य सुनेर फर्कने गरेका छन् । केहि धनी वर्गले जती मुल्य भए पनि किन्न सक्ने क्षमता भएकोले मुल्य बृद्धिको समस्या विशेष गरि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गमा पर्ने सर्वसाधारणको भनाई छ ।
तीज लगायतका चाँडपर्व नजिकिदै गर्दा सुन महँगिएपछि  विक्रि ओरालो लागेको छ । मूल्य बढ्दै गएपछि विक्रि करिब ८० प्रतिशतले घटेको व्यापारीको भनाई छ । सुनको मूल्य वृद्धि अहिले मात्र होइन । हरेक वर्षको चाडवाडको अगाडि यसरी नै सुनको मूल्य उकालो चढ्ने गर्छ । यसबाट सवसाधरण उपभोक्ता निरास बनिरहेका छन् ।
बजेट भाषणयता अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बृद्धि
दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि पहिले असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा